आजको खबर: ‘राजनीतिक सरप्राइज’ दिने डा बाबुराम र उपेन्द्रको तयारीदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे विष्णु पौडेलको बचाउ – MySansar
आजको खबर: ‘राजनीतिक सरप्राइज’ दिने डा बाबुराम र उपेन्द्रको तयारीदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे विष्णु पौडेलको बचाउ
Posted on April 30, 2019 by राजेन्द्र मगर
आज वैशाख १७ गते मंगलबार। आजका दिनमा विभिन्न अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्-
कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएको समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणबारे गहिरो र गम्भीर छानविन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ती जारी गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार प्रकरणमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग गरिसकेको स्मरण गराउँदै त्यसमाथि गहिरो छानविन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न माग गरेका छन।
जग्गा प्रकरणका दोषीलाई जोगाउने ढंगले विषयलाई ढाकछोप र मोड्ने तथा विषयान्तर गर्ने गरी गरिएका प्रचारप्रति कांग्रेस सजग रहेको पनि शर्माले बताएका छन।
कांग्रेसले भन्यो–बालुवाटार जग्गा प्रकरणमाथि गहिरो छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गरियोस् भन्दै काठमाण्डुं प्रेसले लेखेको छ।
डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेतृत्वको नयाँशक्ति नेपाल पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले राजनीतिक रंगमञ्चमा ‘सरप्राइज’ दिने गरी एकता प्रयास सुरु गरेका छन्।
अघिल्लो बर्ष भएको स्थानीय निर्वाचन लगत्तै सुरु भएको एकता प्रयासले सफलता नपाएपछि दुबै दल झण्डै साढे एक बर्ष एकताको सम्बन्धमा निस्क्रिय जस्तै थिए।
तर, केही अघिदेखि फेरि एकताको प्रयास सुरु भएको थियो। भित्रभित्रै अगाडि बढाइएको एकता वार्ताले सफलता पाउने नपाउने यसै हप्ता टुङ्गो लागिसक्ने जानकारी एकता वार्तामा सहभागी दुबै दलका नेताहरुले दिएका छन्।
फोरमले आफ्नो दोस्रो महाधिवेशन बैशाखको २८, २९ र ३० मा गर्दैछ। त्यसअघि आगामी शनिबार (२१ बैशाख) मा उसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।
जानकारहरु के बताउँछन् भने, नयाँशक्तिसँगको एकता प्रक्रिया सकरात्मक ढंगले अघि बढे सोही बैठकले महाधिवेशन अघि नै एकता सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्न सक्छ।
अघिल्लो बर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खराव नतिजा आएसँगै दुबै दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अगावै पार्टी एकताको प्रयास गरेका थिए।
पार्टी एकता गरेर ‘राजनीतिक सरप्राइज’ दिने डा बाबुराम र उपेन्द्रको तयारी भन्दै नेपाल खबरले लेखेको छ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बचाउ गरेका छन् ।
पौडेलले पदीय दुरुपयोग गरेर जग्गा नजोडेको दाबी गर्दै नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने, ‘राजाको शासनका बेला उहाँले बालुवाटारको कुनामा जमीन किन्नु भएको रहेछ ।’
पौडेलका बारेमा हल्ला गरेर पार्टीका विरूद्ध प्रहार गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ । महासचिव पौडेलले किनेको जग्गा सार्वजनिक जग्गाभित्र पर्छ कि पर्दैन ? जालझेलभित्र पर्छ कि पर्दैन ? हडपेको हो कि होइन सबै तथ्यसहित प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
विष्णु पौडेलको बचाऊ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- राजाको शासनका बेला बालुवाटारको कुनामा जमीन किन्नुभएको रहेछ भन्दै अनलाइन खबरले लेखेको छ।
स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको राजकीय भ्रमण छोट्याएर फर्कने भएकी छिन् ।
भण्डारी बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुग्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए।
चीनको दोश्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरममा सहभागी भएलगत्तै राष्ट्रपतिले सोमबार चिनियाँ समकक्षी सी जिनफिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारी भ्रमणको सातौं दिन मंगलबार चीनको ल्हासामा छिन्। उनी बिहिबार मात्र फर्कने कार्यक्रम थियो।
स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी चीन भ्रमण छोट्याएर फर्कंदै भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।
धनुषामा पतिले नै मट्टितेल छर्केर आगो लगाएको एक महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।
शहीदनगर नगरपालिका १ ठुलो चिरैया बस्ने २१ वर्षीया निर्मलादेवी यादवको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी शेखर खनालले जानकारी दिए।
घरायसी विवादको कारण वैशाख ५ गते उनकै पति मुकेश कुमार गोइतले मट्टितेल छर्केर आगो लगाई दिँदा गम्भीर घाइते भएको बताइएकी उनको कीर्तिपुर वर्ण अस्पतालमा उपचारको क्रममा सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको हो।
पतिले जलाएकी अर्की महिलाको मृत्यु: मट्टितेल छर्केर आगो लगाएको थियो निर्मलादेवीलाई भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।